Injiil - Wikipedia
1 Aragtida Masiixiyiinta
2 Aragtida Islaamka
2.1 Jadwalka Nabiyada iyo Rusuusha Kutubta lagu soo dejiyay
2.2 Kutubta Ku Xusan Quraanka
2.3 Qoraalo La Mid Ah
Injiil Kitaabka Injiil (ingiriis: bible; carabi: ﮐﺘﺎﺏ ﻋﻴﺴﻰ; "kitaabu ciisah") waa kitaab Ilaahay ku soo dejiyay Nebi Ciise (c.s). Erayga Injiil macnihiisu waa war wanaagsan ama bishaaro. Inkasta oo mararka qaarkood Axdiga Cusub lagu magcaabo Injiil, haddana waxaa si gaar ah eraygan loogu yeeraa mid walba oo ka mid ah afarta qoraal ee ugu horreeya Axdiga Cusub oo kala ah Mateeyos, Maarkos, Luuqa, iyo Yooxannaa..
MIYAANAY KITAABKA QUDUUSKA AH LAGU CARABIN?
Ilaaha Qaadirka ah sinaba uma oggolaan karin waxaas oo kale.
Qur'aanku wuxuu ku dhawaaqay: "Qofna ma beddeli karo qaynuunnada Eebbe." - Suuradda 6, Al -Ancaam (Lo'da), aayadda 34.
Kitaabka Quduuska ah wuxuu ku dhawaaqayaa mid la mid ah sida soo socota: “Cawska qoyan waa engegay, ubaxuna waa engegay; laakiinse erayga Ilaaheennu weligiisba wuu waari doonaa. ”- Ishacyaah 40: 8. Qaar baa isku dayay inay Erayga Ilaahay been ka sheegaan, laakiin kuma ay guulaysan. Tusaale ahaan, warqaddii kowaad ee Yooxanaa, 1Jo cutubka 5, aayadda 7, ereyada soo socda ayaa mar keliya lagu daray: "Jannada dhexdeeda, Aabbaha, Ereyga, iyo Ruuxa Quduuska ah: saddexdaasna waa mid." Erayadani kama muuqdaan mid ka mid ah qoraaladii hore ee Baybalka laakiin mar dambe ayaa lagu daray si loo taageero caqiidada Saddexmidnimada ee beenta ah. Culimadu, waxay og yihiin in ereyada noocaas ahi ay yihiin kuwo been abuur ah, oo tarjumaadaha Kitaabka Casriga ah ay meesha ka saarayaan. Qoraalo badan oo Kitaabka Quduuska ah oo afar ama shan qarni ka weyn Qurʼān ayaa maanta lagu arki karaa matxafyada. Marka Kitaabka Quduuska ah ee maanta la barbardhigo qoraalladii hore, waxaa caddaanaysa in qoraalka aan maanta haysanno uu la mid yahay kii Ilaah u waxyooday addoommadiisii ​​hore inay qoraan. Isbarbar dhig suuradda 10, Yunis (Yoonis), aayadda 94: "Haddaad ka shakiso waxaan kuu waxyoonay waydii kuwa akhriyey Kitaabka hortaada."
Waxaa cad inuu Ilaahay Qorninkiisa Quduuska ah daafacay sidaynu maanta Eraygiisa daahirka ah u akhrisanno. Ilaaha Qaadirka ah buuggiisa quduuska ah wuu ilaalin karaa. Eraygiisa waxaa ku qoran: “Cawsku wuu engegaa, ubaxuna wuu dhacaa, laakiinse erayga Ilaaheennu weligiisba wuu waari doonaa.”—Ishacyaah 40:8..
↑ Masiixii Baa Imaadday
↑ Introduction to Matthew
↑ Introduction to Mark
↑ Introduction to Luke
↑ Introduction to John
↑ Ilaahay Eraygiisa wuu ilaaliyaa
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Injiil&oldid=227401"
Last edited on 29 Diseembar 2021, at 15:36
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 29 Diseembar 2021, marka ee eheed 15:36.